Sayniska iyo Tiknoolajiyada Macluumaadka Juqraafi ... iyo Bulshada isticmaala gvSIG ee Honduras - Geofumadas
Luulyo, 2012 Cartografia, cadastre, Baridda CAD / GIS
berrinkii Information Geographic ayaa xoogaa kala bixiyeen in Honduras, oo kama duwana dalalka kale ee Latin American halkaas oo mashaariic badan ka dhigi maal culus khayraadka dibadda ama iskaashiga, laakiin ugu dambeyntii soo afjaro descontinuándose in hay'adaha qashinka dowladda waxtarka macluumaadka iyo iyagoon fulin amarka aasaasiga ah si looga hortago in hal hawl ah dadaalka.
Si kastaba ha ahaatee, waxaan doonayaa in aan badbaadiyo qorshe aan ra'yi ka haysto in uu yahay mishiinka xoogga saaraya jilayaasha kala duwan iyo in waqtigaa la dhisi doono qayb ka mid ah doorka ku matala Guatemala Jaamacadda San Carlos, xadka guild ee Costa Rica la leh Colegio de Ingenieros Topógrafos iyo awoodda hay'adeed ee ISKU DIIDO ee Nicaragua. Dhamaan ficilada aadka u wanaagsan oo ay la socdaan daciifnimada ee ah in la burburiyo oo kaliya degaanka deegaanka laakiin degaanka gobolka.
Maxay ku lug leedahay maaha hay'ad qoto-dheer oo yaqaanno sida loo sameeyo wax kasta, laakiin cidda isku-dhafaysa iyo joogtaynta dhibco daciif ah: Aqoonsiga akadeemiyadda. Waxaan tixraacayaa Farsamada Sayniska Sayniska Jaamacadda Qaranka ee Honduras, halkaas oo ilaa taariikhda la isugu keeno dadaal aan rajeynayo in qodobada mustaqbalka ay sii xoojiyaan:
Master Master Planning.
Waxay ku dhowdahay 2004 iyadoo taageero ka heleysa Jaamacada Alcalá iyo Hay'adda Iskaashiga Iskaashiga Iskaashiga Iskaashiga II ee PATH. Natiijada shaqadan iyo mashaariicda cilmi-baarista kale ayaa la daabacay sida:
Barnaamijka "Multimedia atlas multimedia" ee Xarunta Taariikhda ee Degmada Honduras.
Falanqaynta mashaariicda ee aqoonsiga aagagga iyada oo mudnaanta koowaad siineysa horumarinta iyo horumarinta Xarunta Taariikhda Tegucigalpa iyo Comayagüela.
Daraasad lagu sameeyay qaybo ka mid ah qaababka dabiiciga ah ee degaanka magaalooyinka ee Bartamaha Dhexe.
Calaamadaynta hydrothermal iyo isbeddel diineed ee daboolka ciidda ee hababka fogfogista ee dooxada Choluteca.
Sameynta shabakadda geodetic ee Tegucigalpa, iyadoo la adeegsanayo teknooloojiyada GPS iyo xiriiriyaha shabakadaha tixraaca ee rasmiga ah ee Bartamaha Ameerika.
abuurista Kaabayaasha Data astaanta u ah qiyaas UNAH ee heer qaran ee qaabka guud ee mashaariicda kala duwan: dhulka, dadka iyo waaritaanka.
Abuurista cusub SEXTANTE iyo ku saabsan gvSIG, oo diiradda saaraya hagaajinta codsiga gvSIG-FONSAGUA qorsheynta ficilada biyaha iyo fayadhowrka ee meelaha miyiga ah ee Honduras UDC-UNAH-UNEX.
Labadii Sanadood ee ugu dambeeyay waa geeddi-socodka hadda jira ee horumarinta, taas oo soo jiidata. Mid ka mid ah iyaga oo aan horey uga hadlin maqaal laakiin ma ahan habka haatan jaamacada loo qaaday.
Xirfadaha Sayniska Warshadaha iyo Teknolojiyada.
Waqtigan xaadirka ah ayaa Koolajku wuxuu u adeegaa fasalo guud oo ku jira heer dhexdhexaad ah:
Hordhaca Nidaamka Goobaha Caalamiga ah
Horudhaca Nidaamka Macluumaadka Juqraafiyeed
Horudhacidda Qalabka fog
Laakiin sannad ka 2013 ayaa la filayaa inuu ku soo bilowdo bixiya Bachelor ee loo yaqaan CTIG la Jaamacadda innovates ee ku yaala goobahan in search of waxbarista khayraadka domain fiicnayn tacliin aadanaha ee meelaha Sayniska iyo Technology Information Geographic sida :
Nidaamka Gawaarida Caalamiga ah
Kaabayaasha Macluumaadka Muuqaalka
Sayniska Sayniska ee la xidhiidha baaxada Sayniska iyo Teknoolajiyada Macluumaadka Geeyaha, si loo taageero qaybaha kala duwan ee dalka.
Koorsadu waxay ka kooban tahay 52 alaabooyinka, 231 qaybaha lagu qiimeeyo, waxaana la qorsheynayaa in lagu qaado sanadaha 5. Waxyaabaha ugu fiican ee tan la mid ah waa in akadeemiyadda ay ku jirtaa hawleheeda, in la dhiso shuruudaha qalinjebinta si uu uqalmo inuu uqalmo inuu kaqeyb qaato beerta la xidhiidha. Hawlaha aan isku mid ahayn marka ay soo saaraan shirkad gaar ah ama hay'ado dadweyne oo aqoonsi ah.
Dabcan saameynta ugu fiican ee tani waa xoojinta hawlaha hay'adaha jira, horumarka xirfadlaha waxaa lagu faray goobta dhexdeeda sida:
Machadka Property, Department of Public Works iyo Guriyeynta, Forest Ilaalinta Institute, Department of Waraabka iyo Musiibooyinka Dabiiciga ah, Wasaaradda Beeraha, Guddiga Joogtada ah kawarqabka, Agaasinka Macdanta Gudbinta, Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Population, Empresa qaranka Energy iyo Power, Shirkadda Isgaarsiinta Honduran, Honduran Institute Dalxiiska, qaranka Institute of Statistics. Intaa waxaa dheer, jaamacadaha isku midka ah iyo waaxda gaarka ah.
Takhasiilaha Xirfadaha Gaaban ee Cadastare.
Tani waa mashruuc oo doonaya inay disaggregate degree hore farsamo ah oo qaadataa dalab heer ballaaran, madaxdii kiiska dalkii degmada halkaas oo tirada ugu badan ee dawladaha hoose ma awoodaan inay bixiyaan lacagta shahaadada koowaad ee. Sidoo kale in la buuxiyo farqiga meesha Survey Qaranka ee Dhulka ayaa la dayacay door ka iman karta xirfadaha ku salaysan aqoonsiga khayraadka aadanaha.
Koorsadani waxay kudhisan tahay fasalada 28, maadooyinka qaarkood ee maaddooyinka maaliyadeed iyo kan caadiga ah ee xoogga leh. Inkasta oo ay suurtagal tahay in la barbardhigo shahaadada.
Mawduucan wali wuxuu ku jiraa miisaanka naqshadeynta laakiin waxaa la rajeynayaa inuu ku socdo sanadaha soo socda sida maadada loo hormarinayo.
Your Linkage in ay Open Software Software
Waxyaabaha ugu soo jiidashada leh ee ku saabsan barnaamijkan waa furfurnaanta barnaamijka bilaashka ah.
Waa maaddo ku saabsan oo aan rajaynayaa in aan laga qayb ka qaybta kale laakiin waxa suurto gala in sannadaha soo socda awood this urursan dadaallada ee aasaaska ah ee Community of gvSIG isticmaala, ma ahan oo keliya, sababtoo ah qaar ka mid ah layliyada ay ku jirtay qalab laakiin by xiriirinaya oo taageero ka hantidii dadweynaha ee Spain, halkaas oo initiative dhasho laakiin shaki la'aan laftiisa dhig doonaa Ameerika more xiiso badan kuwii arkay saamaynta Europe iyo Afrika.
Latin America waa qaarad bacrin ah, waayo, software lacag la'aan ah, sida aan soo aragnay in koorta koonfurta. Tani waa wax iska cad ma aha oo kaliya by badbaadinta matalaya Oggolaanshaha software lahaansho laakiin by heerka sare ee burcad badeeda, soconin ka ah dadaallada ay tabar in mustaqbalkiisa maamulka iyo muhiimada qaaradaa oo dhan kaas oo si rasmi ah ku hadla luqado kaliya labo: Spanish iyo reer Portugal, la mid ah sida Jasiiradda gaarto meesha gvSIG dhashay.
Waqtiga wanaagsan ee dadaalkan, waxaan dooneynaa natiijooyin muhiim ah oo aan ka ahayn Honduras oo keliya, laakiin sidoo kale gobolka Central American ayaa ka faa'iideysanaya meelaha bannaan ee hore iyo meesha loo baahan yahay waa heshiis.
Post Previous«Previous Nidaamyada isdhexgalka UTM ee lagu soo bandhigay Khariidadaha Google
Post Next Raajo degdeg ah ee Geofumadas in ka badan bilaha 75Next »
Hal Jawaab u Jawaab "Sayniska Warshadaha iyo Tiknoolajiyada ... iyo Community User GvSIG ee Honduras"
Manuel Enrique Jimenez Rubio isagu wuxuu leeyahay:
Xirfadlaha maanta waxa uu raadinayaa inuu la qabsado adduunyada habka isbedelka, xagga aqoonta meelaha aan ka mid ahayn xirfaddiisa laakiin taasi waxay la xiriirtaa aaggiisa shaqada.